प्रतिगमन विरोधी संघर्षका कविताहरू – Dainik Lumbini
प्रतिगमन विरोधी संघर्षका कविताहरू
आज वैशाख ११ गते । आजभन्दा १५ वर्ष पहिले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन निष्कर्षमा पुगेको दिन ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले विघटित संसदको पुनःस्थापनाको घोषणा गर्र्दै प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य गरेपछि २०६२ चैत्र २४बाट शुरु भएको देशव्यापी आम हड्ताल १९ औं दिनमा विजयमा टुंगिएको थियो । त्यसपछि वैशाख १५ गते पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठक बस्यो । जेठ ४ गते ‘प्रतिनिधीसभाको ऐतिहासिक घोषणा’ जारी भयो । त्यसले राजतन्त्रलाई निष्क्रिय पार्दै गणतन्त्रको बाटो कोर्‍याे । प्रतिगमनविरुद्धको त्यो ऐतिहासिक आन्दोलन २०६२ चैत्र २४ गतेबाट शुरु भएको थियो । २०५९ सालबाटै प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन शुरु भईसकेको थियो । उक्त प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा साहित्यकारहरू अग्रणी मोर्चामा थिए । कलमको मोर्चामा बुटवल र यस क्षेत्रका साहित्यकारहरूको योगदान उल्लेखनीय छ । त्यसक्रममा अनेकौ सडक कविता भएका छन् । अनेकौ कोठे गोष्ठी भएका छन् । अनेकौ फुटकर प्रकाशन भएका छन् । कैयौं संग्रह प्रकाशित भएका छन् । सामुहिक प्रयत्नको स्वर— ‘लोकतन्त्रको शंखनाद’ प्रकाशित भएको थियो । भने कैयौं कविहरूका एकल कविता संग्रह पनि प्रकाशित भएको थियो ।
प्रतिगमन विरोधी संघर्षका पहिलो शहीद हुन्— देविलाल पौडेल । २०५९ चैत्र २५ गते मंगलबार मूल्यवृद्धि विरुद्धको आन्दोलनको क्रममा बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका नेता देविलाल पौडेलको शहादत भएको थियो । उनको हत्याको विरोधमा र संघर्षको पक्षमा चैत्रको अन्तिम शनिवार साहित्य संगम, बुटवलमा कविताहरू वाचन भए । ती कविताहरूलाई सृजनशील साहित्य यात्राले देवीलाल स्मृति अंकको स्वरूपमा प्रकाशित गरेको थियो ।
वैशाख ११ गते, त्यो ऐतिहासिक दिनको संस्मरण गर्दै, त्यो गौरवपूर्ण संघर्षको सम्मान गर्दै पाहुर प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनका सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनका प्रथम शहीद देविलालको सम्मानमा त्यतिबेला प्रकाशित कविताहरू पुनःप्रकाशित गर्दछ । लोकतन्त्रका पक्षमा तत्कालिन समयमा देखेका सपना अझै पुरा भएका छैनन् । साहित्यकारहरू कलमको मोर्चाबाट लोकतन्त्र, मानवता, भातृत्व र समानताको पक्षमा अनवरत संघर्ष हुन जरुरी छ । फेरि यी रचनाहरू पाठ गरौं । त्यो गौरवपूर्ण संघर्षको जोश, जाँगर, उत्साहको स्मरण गरौंः
देवीलाल पाैडेलको फाेटाे लिएर गरिएकाे प्रदर्शन । २०६३ । तस्वीर स्राेतः गेट्टी इमेज
आत्मा अविनाशी छ
यसैले अमर छ ।”
“जब आत्मा शरीरबाट निस्कन्छ
शरीर केही होइन,
ऊ ढल्छ, मर्छ
माटो र खरानी भएर सकिन्छ ।
तर आत्मा !
उसले त वस्त्र फेर्‍याे ,
नयाँ लाउँछ ।”
किन बुझ्दैनन् यी बन्दूकहरूले
फेरि देवीलाल ढाले !
त्यो त माटोको ढिस्को थियो भत्क्यो
आत्मा बोकेर देवीलाल
उनी कोटीमा समाहित भए
सहस्रमा सहस्र भए
हिजोसम्म एउटा देवीलाल हिंड्थ्यो
आज यो देश नै देवीलालले ढाकिसके ।
किन बुझ्दैनन् यी बन्दूकहरू
इतिहास यसै गरी लेखिन्छ
इतिहास यसै गरी जन्मिन्छ
इतिहास हो देवीलाल
आज देश ब्युँझिएको छ ।
रात खसेको बेला दिनहरूको माझमा
महाराजधिराजको सक्रिय शासनकालको
एक सय सतासिऔं दिनको साँझमा
घाम अस्ताउँदै थियो अर्थहीन
अचानक एउटा रातो फूल झारियो गुलाफको बोटबाट
एउटा रक्तबीज मारियो पाशविक मनोविज्ञानको चोटबाट ।
महाराजधिराजको इच्छानुकूल कति चल्छ समय ?
महाराजधिराजको सपना पूरा गर्न कति जल्छ मान्छेको सपना ?
उराठ लाग्दो स्वाङ्हरूको झ्याङ्मा कति लुक्नु,
सडकमा टायरहरू बालिएका छन्
र प्रकाश पारेर रात खसेका यी दिनहरूमा
खोजी भैरहेको छ अनवरत् सत्यको ।
जति खस्दै जान्छन् फूलहरूर बोटबाट
त्यति त्यति नै खस्दै जान्छ आस्थाको श्रीपेच
मान्छेहरूका मनहरूबाट घृणाको धुलोमा
आस्थाको श्रीपेच खसेका मनहरू
बिल्कुल मुक्त हुन्छन् स्वतन्त्र, दासताको लज्जाबोध हुँदैन मनहरूमा
र आगो लगाउन तयार हुन्छन् ती
मानवता विरुद्ध सघन हुँद गइरहेका विष वृक्षको वनहरूमा ।
ठीक यहींबाट शुरु हुन्छ
महाराजधिराजको इच्छा प्रतिकुल पनि काम हुन
सडक, शासन र सत्ता पनि ‘जाम’ हुन
महाराजाधिराजको इच्छा बिना पनि सहरले हड्ताल गर्छ
र गतिशील हुन्छ रक्तबीजहरूको हुल
आस्थाको श्रीपेच जिल्ल पर्छ घृणाको धुलोमा पछारिएर
अहो श्रीपेच खसेको मन !
नदी, घाम र बतास जस्तै मनहरू
श्रीपेच बिनाका मनहरू ।
शहरको एकछेउमा रगतले भिजेको माटोको आसन्न
बेवारिस भएर खसेका छन् मनहरूबाट आस्थाको श्रीपेच
श्रीपेच खसेका मनहरूले चलाइरहेछन् शहर
महाराजाधिराजको सरकार छैन यहाँ
प्रशासन र कानुन छैन
शहरहरू महाराजाधिराजको इच्छा बिना पनि चल्दा रै’छन् ।
आस्थाको श्रीपेच जिल्ल पर्छ
जति जति बढ्दै जाने रहेछन् रक्तबीजहरू
खसाल्दै मनबाट क्रमशः आस्थाका श्रीपेचहरू ।
जनताको खून खान भोटे कुकुर पल्किदैछ
गाउँ घरमा अब फेरि ठूलो आगो सल्किदैछ ।
एक मरे हजारौंले ज्यान होम्न तयार छन्
रणभूमिमा फेरि पनि नयाँ युद्ध झल्किदैछ ।
विद्यार्थीको एकतालाई खेलबाड नठान है
अरिङ्गालको गोलो सरि भुनभुनाउँदै लम्किदैछ ।
आदरणीय वीर शहीद देवीलाल अझै तिम्रो
सम्मानले हाम्रा बीच तिम्रो शिर अग्लिदैछ ।
सत्य अगाडि बढिरहेछ
सत्य खोज्दा विमति हुन्छ भने
कसको के लाग्छ र ?
औंसीका ती कहालीलाग्दा रातहरू
अझ लम्बाउने प्रयत्न गरिन्छ भने
विद्रोहको ज्वाला निस्केकै हुन्छ
शायद फरि पनि देवीलालहरूको हत्या हुन्छ
मखमलीहरू बलात्कृत हुन्छन्
तर, सत्य अगाडि बढिरहेकै हुन्छ ।
देवीलाललाई बिदाई दिएपनि
ऊ त सधैँ बाँचिरहन्छ
त्यसैले त उसको यात्रा
गोली लागेको बुद्धले पनि
विद्रोहको आग्रह गरिरहेछ
त्यसैले त देवीलाल मरेपनि
सत्य अगाडि बढिरहेछ ।
श्रवणको सम्झनाः केही केटौलेपनको स्मृति, केही समझदारीहरू
कोरोनाको ‘उपचार’ योग र आयुर्वेद
महामारी छल्दै रक्तदान